Nkọwa okwu na Ecommerce ma ọ bụ azụmahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
Nkọwa bụ isi na Ecommerce ma ọ bụ azụmahịa kọmputa
Ọ bụrụ na ị na-amalite ije gị na-adọrọ mmasị azụmahịa ụwa, o doro anya na ị ga-enweta ahịrịokwu ma ọ bụ okwu a na-eji mgbe niile ịkọwa ma ọ bụ zoo aka na ngwaahịa, ọrụ, ụlọ ọrụ, wdg. Iji nyere gị aka ntakịrị na nke a, n'okpuru anyị na-ekekọrịta ya Nkọwa bụ isi na Ecommerce ma ọ bụ azụmahịa kọmputa.
Azụmaahịa na Azụmaahịa (B2B)
Ọ bụ naanị ụdị azụmaahịa na usoro nke otu ụlọ ọrụ na-erere ụlọ ọrụ ọzọ
Azụmaahịa na Costumer (B2C)
Ọ bụ ụdị azụmaahịa na usoro ụlọ ọrụ na-ere ndị ahịa ozugbo.
1 Onye na-ere ahịa (onye na-ere ahịa)
2 Ndụ Onye Ndụ Ndụ (CLV)
3 Ọnụ ọgụgụ ntụgharị
4 Ọdịdị peeji kachasị
5 Nkewa ndị ahịa
Onye na-ere ahịa (onye na-ere ahịa)
Otu onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-azụta ngwaahịa n'ọtụtụ ahịa n'aka ndị mgbere dị iche iche, na ebumnuche nke ịre ha na ndị na-ere ahịa na-erekwa ha ndị ahịa. Ndị nkesa na ndị na-ere ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka ndị mmekọ site na otu ọwa.
Ndụ Onye Ndụ Ndụ (CLV)
Ọ bụ amụma nke ego ga-enweta n'ọdịnihu ma ọ bụ uru, uru na uru net na onye na-azụ ahịa ga-ewepụta n'oge mmekọrịta ya na onye ahịa ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ntụgharị
Ọ bụ ọnụọgụ nke bụ akụkụ nke akụkụ ndị ọzọ ejiri iji nyochaa ahụike nke Ecommerce. A na-agbakọ ya site na ịkekọrịta ọnụọgụgụ ndị mejupụtara ihe enyere site na ọnụọgụ ndị ọbịa na otu peeji ma ọ bụ usoro.
Ọdịdị peeji kachasị
Ọ bụ usoro nke imepụta, nyochaa na ịhazi ihu ọma maka ibe ibe ya iji bulie ntụgharị okporo ụzọ.
Nkewa ndị ahịa
Ọ na-ezo aka n'iche ndị ahịa kachasị baa uru na ndị nwere ikike inweta ego kachasị elu. Ndị a nwere ike ịgụnye ndị na-azụghachi azụ, usoro iwu iji, ahịa ndị na-enye nyocha, yana ndị ahịa na-anabata onyinye na nkwalite.
Bọchị na-esote Ekele na United States, nke na-egosi akara mmalite nke oge ịzụ ahịa ebe ndị na-ere ahịa na-enye nkwalite na ọnụ ala miri emi na ngwaahịa niile na ụlọ ahịa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Nkọwa bụ isi na Ecommerce ma ọ bụ azụmahịa kọmputa
MarketPress, WordPress ngwa mgbakwunye maka Ecommerce
Etu esi eji Instagram maka Ecommerce gị